Uhuru Kenyatta oo sheegay inaysan Ciiddankiisa ka soo bixi doonin Somalia ilaa ay ku guuleystaan Alshabaab – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Uhuru Kenyatta oo sheegay inaysan Ciiddankiisa ka soo bixi doonin Somalia ilaa ay ku guuleystaan Alshabaab
Madaxweynaha dalka Kenya waxa uu hadalkaasi ka sheegay mar uu maanta soo booqday Askarta ku dhaawacantay dagaalkii ay Ciiddanka Kenya iyo Alshabaab ku dhex maray duleedka Degmadda Laamu, kuwaasi oo lagu daaweynayo Isbitaalladda Ciiddamadda ee The Forces Moemorial Hospital oo ku yaalla magaalladda Nairbi.
Waxa uu intaasi ku daray inaysan jirin waddo kale oo ay Somali kaga soo baxaan, iyadoo uusan weli dhamaanin La-dagaalanka Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
“Waxaan ku sii nagaan doonaan gudaha dalka Somalia ilaa lagu guuleysano dagaalkaasi. Waxbana nagama hor joogsan karo inaan sii joogno halkaasi, xitaa haddii la soo weeraro dalkeenna” ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
Waxa uu intaasi ku daray in Ka-bixitaanka degdegga ee Somalia inay Alshabaab ka taageeri karto inay goobo cusub qabsadaan, wuxuuna ku goodiyey inay la dagaalami doonaan Alshabaab, isla markaana ay cagta marin doonaan, waa sida uu hadalka u yiri.
Hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay Isbahaysiga mucaaradka ee CORD ugu baaqeen Dowladda Kenya in ciiddanka laga soo saaro Somalia, si ay Dagaalamayaasha Alshabaab u joojiyaan weeraradda ay ka fuliyaan gudaha Kenya.
Dhinaca kale, Dowladda Kenya waxay si rasmi haaan u shaacin la’ yihiin tiradda ciiddanka looga dilay tan iyo markii ay gudaha u galeen dalka Somalia.
Waxaana la sheegaa in boqolaal Askar Kenyaati ayaa la dilay tan iyo markii ay ciiddankaasi soo galeen gudaha dalka Somalia bishii October 16-kii ee sannadkii 2011-kii.
Dhinaca kale, in ka badan 350 Kenyaati ah ayaa lagu dilay gudaha dalka Kenya, tan iyo markii ay Dagaalamayaasha Alshabaab bilaabeen weeraradaasi oo cadaadis-saar u ah si Askarta Kenya looga soo daad-gureeyo gudaha dalka Somalia.
Ciiddanka Badda Japan ee La-dagaalanka Burcad-baddeeda Somalia oo xilliga loo kordhinayo